musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » 2022 yekufamba hacks: Yakanakisa nguva yekuverenga ndege uye mahotera
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
2022 yekufamba hacks: Yakanakisa nguva yekuverenga airfare uye mahotera
Sekusafungidzira kunosanganisirwa nedenda rakasara, kushanduka-chinja kucharamba chiri chakakosha kune vafambi vekumba nekune dzimwe nyika.
Zuva rakakodzera revhiki rekubhuka nendege iSvondo, kwete Chishanu.
Nepo dzimba dzekugara dzimba dzakaderera muna 2020, mitengo yakakwira zvishoma nezvishoma pamusoro pegore rapfuura.
Sezvo vafambi vachiramba vachironga nzendo dzemumigwagwa, indasitiri inoratidza zuva rakanakisa rekubhuka rendi yemota iri China kuti nzendo dzekumba.
Chirevo chitsva chinoratidzira hacks dzegore rino dzekufamba, kusanganisira iyo yakanakisa nguva yekubhuka ndege, nguva yekufamba uye mamwe matipi ekubatsira vafambi kufamba kubhuka zororo muna 2022, yaburitswa nhasi.
Mushure memwedzi gumi neshanu vafambi vekunze vari kutanga kubuda zvakare, vakagadzirira kuongorora nyika uye zviitiko zvehupenyu zvinoshandura zvinogona kuuya zvakare. Sekureva kweshumo, mumwe muvashanyi vana vanotsvaga matipi ekuchengetedza uye makumi mashanu neshanu zvinoratidza kuti vari kuda kuchinjika nezvirongwa zvavo zvekufambisa kuchengetedza mari.
Airfare yekumisikidza hacks ye2022
Kubva pane data kubva ARC, avhareji mitengo yetikiti (ATPs) mukutanga kwa2021 yaive ichiri yakakwira kupfuura makore apfuura; zvisinei, uyai Kubvumbi pakanga paine kuderera. ATPs dzendege dzenyika dzepasirese nedzepamba kubva ipapo dzakaramba dzichiwedzera asi dzichiri paavhareji kutenderedza 25 muzana muzana zvichienzaniswa ne2019.
Yakanakisa Kutsvaga Hwindo
Mitengo yendege yekumba inowanzo kutanga kuwedzera mazuva makumi matatu nemashanu isati yasimuka, nepo mitengo yendege dzekunze inotanga kuwedzera mazuva makumi maviri nemasere zvisati zvaitika. Iyo inotapira nzvimbo yekubhuka yekumba ndege iri pakati pe35 - 28 mazuva pamberi, nepo ndege dzenyika dzese dzinofanirwa kuverengerwa mwedzi mitatu kusvika mina pamberi peiyo mitengo yakaderera.
Yakanaka zuva revhiki kubhuka
Zuva rakakodzera rekubhuka nendege iSvondo, kwete Chishanu. Kune dzendege nendege izvi zvinogona kuponesa vafambi kutenderera gumi neshanu muzana uye kune dzimwe nyika nendege mari dzinenge gumi muzana.
Yakanaka zuva revhiki rekufamba
Zuva rakanakira kutanga rwendo rwekumba Chishanu kwete Muvhuro, uko vafambi vanogona kusevha kutenderedza 25 muzana.
Kune dzendege dzenyika dzese, tanga rwendo urwu neMugovera, kwete neChipiri kusevha ingangoita gumi muzana.
Mwedzi wakanakisa wekufamba
Vafambi vanoronga kwavo 2022 nzendo vanogona zvakare kuvhura yakawanda mari nekuchinjika uye kusarudza mwedzi wakakodzera kuti ufambe:
Mwedzi wakakodzera kusimuka ndiNdira kana Zvita. Kune dzendege nendege izvi zvinogona kuponesa vafambi kutenderedza 15 muzana uye ingangoita makumi matatu muzana yekuenda kwenyika dzese.